Famerenana ny Dock ofisialy ho an'ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Efa ho ny antsasaky ny 6 volana mahery no nandraisan'i Apple ny dock ofisialiny hitakiana ny Apple Watch. Raha feno ny fototr'ireo fitaovana, volavola ary vidiny ho an'ny famantaranandrony ny tsena, Apple dia tsy sahy nanambara ny toerany ofisialy, ary raha ny marina dia natao tao anaty incognito tanteraka indrindra ny famoahana azy, tsy nisy fanambarana lehibe, na ny famoahana gazety malina. Ny dock famerenana andriamby vaovao ho an'ny Apple Watch dia misy ary safidy tsara ho an'ny ireo izay mitady famolavolana tsotra, minimalista ary kalitao, na dia tsy maintsy mandoa izany aza izy ireo.
Ny famolavolana ny fotony dia tena tsotra: mivezivezy miaraka amin'ny charger magnetika eo afovoany. Ny tapany ambony dia vita amin'ny plastika fotsy malefaka izay hiaro ny famantaranandronao sy ny tadiny, ary ny faritra ambany amin'ny fipetrahana microfiber izay hisorohana anao tsy hanimba ny velaran-tany ipetrahanao azy. Izy io koa dia base mavesatra, ka azonao atao ny mandray ny Apple Watch tsy hatahoranao ny hitondranao anao ny fotony.
Ny toetra mampiavaka ny fotony dia ny fahafahany manainga ny magazina metaly hametraka azy amin'ny toerana mitsangana ary ampiasao ny fotony miaraka amin'ny famantaranandro sy ny maody «Nightstand», zavatra izay hafahafa tsy lasa malaza loatra eo amin'ireo toby efa misy eo amin'ny tsena.
Amin'ny alàlan'ny fametrahana ny famantaranandro mitsivalana na mitsangana Ity fototra ity dia mifanaraka amin'ny tady rehetra anaovanao, na azo sarahina tanteraka na tsia, toy ny tranga misy amin'ny Milanese na ny rohy vy. Ity antsipiriany ity dia tsy raisina matetika rehefa mividy base ary avy eo dia tonga ny tsy ampoizina mahafinaritra.
Na inona na inona endrik'ilay fotony, izay mety tiana na tsia, ny tsy azo iadian-kevitra dia ny kalitaon'ny famaranana. Marina izany mety tsy ho hita ny fisian'ny loko hafa hahafahana mampifangaro azy amin'ny tadinao ankafizinao na mba tsy hifandona amin'ny haingon-trano ao amin'ny efitranonao, fa iza no mahalala raha tsy ho ela dia hanomboka loko hafa i Apple ao anatin'izany ny Product (RED).
Avelantsika hatramin'ny farany ny vidiny: € 89 dia tsy maintsy mandoa vola ianao hahazoana ity toby ofisialy Apple ity, vidiny avo kokoa noho ny toeran'ireo fotokevitra mitovy amin'izany amin'ny kalitaon'ny fitaovana sy ny endriny. Fa raha heverintsika fa ao anatin'izany ny charger magnetika sy tariby misy tselatra dia tsy dia avo loatra ny vidiny. Amin'ity Apple Dock ity dia tsy mila mividy tariby famenoana fanampiny ianao, noho izany dia hitahiry € 35 ianao izay lafo indrindra.
Ny dock ofisialy ho an'ny Apple Watch dia manana vidiny lafo izay mahatonga azy io tsy ho mahasarika ny ankamaroan'ny mpampiasa. Tsy iadian-kevitra ny kalitaony sy ny endriny, saingy misy toby avo lenta amin'ny vidiny ambany.. Na izany aza, raha mila mividy tariby fanampiny ianao, zavatra iray tena azo inoana satria tsy ampidirin'ny tobin'ny antoko fahatelo, dia tsy dia avo loatra ny vidiny satria misy ny zavatra ilainao rehetra handoavana ny Apple Watch, afa-tsy ny adaptatera ho an'ny plug izay tsy maintsy apetrakao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Famerenana ny Dock ofisialy ho an'ny Apple Watch
el_avi dia hoy izy:
Tsy hitako io fotony io, raha tsy tonga ao an-tsaiko i Nacho milaza fa tsy maintsy apetrakao ao ambadiky ny fotony ilay "rantsantanana kely" ... ...
Traumatisé amin'ny fiainana….
Mamaly an'i el_avi
na izaho koa aza ?
Pebble dia mampihena ny vidin'ny smartwatches
Tagloo, ny fomba tsotra indrindra hanisy marika, hizarana ary hikarohana sary